TCDD သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ရထားလမ်းများပေါ်တွင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ with နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီTCDD သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ရထားများပေါ်တွင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ with နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည်
18 / 01 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
tcdd မှ စ၍ လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိပုဂ္ဂလိကကဏ္ with နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်
ရထားလိုင်းများကိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများအားတင်ဒါဖြင့်ဖွင့်ရန်ခလုတ်ကိုဖိပြီး ၂၀၂၁ မှ စတင်၍ TCDD သည်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ on နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
SözcüErdoğanSüzer၏အစီရင်ခံစာအရ, “ ရထားလမ်းပေါ်ကုန်တင်သဘောင်္တင်ပြီးနောက်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ companies ကုမ္ပဏီများအတွက်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားသည်။ စည်းမျဉ်းမူကြမ်းအသစ်အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ TCDD အပြင်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ၏ရထားများသည်အစိုးရပိုင်ရထားလမ်းများပေါ်တွင်ခရီးသည်များသယ်ဆောင်လာသည်။ လက်ရှိရထားလမ်းကို ၁၀ နှစ်ငှားရမ်းမည့်ပုဂ္ဂလိကရထားကုမ္ပဏီများက၎င်းတို့အားပျက်စီးစေသောလိုင်းများပေါ်တွင်လုပ်ကိုင်ရန်သဘောတူပါက၎င်းတို့၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုနိုင်ငံတော်ကဖုံးအုပ်လိမ့်မည်။ စည်းမျဉ်းသစ်သည်သက်ဝင်လာပါကအဝေးပြေးဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ပုဂ္ဂလိကရထားကုမ္ပဏီများသည်ရထားလမ်းများပေါ်တွင်အမှုဆောင်ကြလိမ့်မည်။ TCDD မှဖွဲ့စည်းထားသည့်ရထားလမ်းအလုပ်သမားအလုပ်သမားသမဂ္ဂအရာရှိများကပုဂ္ဂလိကကဏ္railအတွက်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမဖွင့်ချင်ဘူးလို့ပြောသည်။
တူရကီနိုင်ငံသည် TCDD သာရထားလမ်းကုန်တင်နှင့်ခရီးသည်တင်တရားဝင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်ကိုသုံးပါရှိရာပြည်နယ်၏မီးရထားပို့ဆောင်ရေး၏လစ်ဘရယ်အပေါ်ဥပဒေအားဖြင့် 2013 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သောဥပဒေအရ TCDD ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်ခွဲခြားသည်။ နိုင်ငံအနှံ့ရှိအခြေခံအဆောက်အအုံကွန်ယက်တစ်ခုလုံးကို TCDD သို့ထားခဲ့ပြီး TCDD Taşımacılık A.Ş. သည်ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုတာ ၀ န် ၀ တ္တရားကို ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်အထိဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ TCDD Taşımacılık A.Ş. ၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်းနိုင်ငံတော်မှတာဝန်ယူမည်ဖြစ်သောဤတာဝန်ဝတ္တရားသည် ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ တွင်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၂၁ မှအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတာ ၀ န်သည် TCDD Tasimacilik နှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ through နှစ်ခုလုံးမှတဆင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၀ န်ဆောင်မှုကိုယူပါကအခကြေးငွေပေးချေမှုကိုလည်းထိုကုမ္ပဏီသို့ပေးလိမ့်မည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏မီးရထားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသည်အများပြည်သူအားတရား ၀ င် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖွင့်လှစ်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေမူကြမ်းကိုဆွေးနွေးရန် TCDD ၏ယခုနှစ်ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ "မီးရထားခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စည်းမျဉ်းများ၊ ပြည်သူ့ ၀ န်ဆောင်မှုစာချုပ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပြည်သူ့ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေ" ခေါင်းစဉ်မူကြမ်းအရ TCDD ၏လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုအောက်ရှိရထားလမ်းနှင့်ရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုလည်းပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများအတွက်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ခရီးသည်များမှအပကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို TCDD မှကုမ္ပဏီ ၃-၄ မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်သည်။
အကယ်၍ စည်းမျဉ်းမူကြမ်းပြis္ဌာန်းခဲ့ပါကတိုင်းပြည်အနှံ့ရထားလမ်းအားလုံးကိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများအတွက်ဒေသတွင်းနှင့်အမျိုးသားအဆင့်တွင်တင်ဒါတင်ဒါဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်လိုသောကုမ္ပဏီများသည်ဒေသတွင်းသို့မဟုတ်အမျိုးသားအဆင့်တွင်လိုင်းအားလုံးတွင်တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ တင်ဒါများကိုအမြန်နှုန်းမြန်မြန်မြန်၊ အဓိကလိုင်းနှင့်ဒေသတွင်းခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးကိုတစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ စုပေါင်း၍ ဖြစ်စေပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဝန်ထမ်းများ TCDD တွဲဖက်
စစ်ဗိုလ် 624 363
သဘောတူထားသော 7.916 5.886
အမြဲတမ်းအလုပ်သမား 5.162 6.537
jobber 251 1
မှတ်ချက် - SAI အစီရင်ခံစာမှယူသည်
ပြင်ဆင်ထားသောမူကြမ်းအရပုဂ္ဂလိကကဏ္ high သည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများကိုသာအလိုရှိပါကရထားများနှင့်ပုံမှန်ရထားဖြင့်ထိုရထားများနှင့်အတူလည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ companies ကုမ္ပဏီများမှအမြတ်အစွန်းမဟုတ်သော်ငြားအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအတွက်လုပ်ကိုင်ရမည့်လိုင်းများအားလေလံဆွဲရသည့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုဖုံးလွှမ်းထားပြီး 'ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအမြတ်အစွန်း' နှုန်းကိုပေးလိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ sector သည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှခရီးသည်များကိုသယ်ဆောင်ရန်ရထားအစုံများကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်သို့မဟုတ်အလိုရှိပါကကားငှားနိုင်သည်။
ယှဉ်ပြိုင်ထဲမှာ ray တက်အပူနေသည်
YHT အင်ဂျင်နီယာ 2017 ကနေရေး Simulator အပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပါလိမ့်မည်
အဆိုပါ 17 2021 အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများတွင်ဒေါ်လာဘီလျံပြီးစီးရန်
Üsküdar-Beykoz Metro 2021 အတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်
စမ်းသပ်ခြင်း Drive တွင် Bursa 2021 နယူးပစ်မှတ်အဆိုပါမြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်း
ZİLE, TURHAL, HACIBAYRAM, BASIN နှင့် FUTUR STATION FIELDSES ၏ LED စီမံကိန်းနှင့်အတူ ...
Karaman လယ်ထွန်စက်အတွက်ရထားလမ်းဘတ်စ်ကား Collider: 1 သေ